प्रहरी र विप्लव कार्यकर्ताबीच मुठभेट, प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते
भोजपुर–टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–१ तिम्माको धोद्रे जङ्गलमा प्रहरी र नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) समूहका कार्यकर्ताबीच मुठभेट भएको छ ।
आज दिउँसो भएको मुठभेटमा प्रहरीको गोली लागेर षडानन्द नगरपालिका–२ कुदाककाउले घर भएका सो समूहका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे घाइते भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
घिमिरेको खुट्टामा गोली लागेको छ । घिमिरलाई उपचारका लागि धरान पठाइएको प्रजिअ खतिवडाले जानकारी दिए ।
घिमिरेको साथबाट हतियारसमेत फेला परेको बताइएको छ । सो ठाउँ छिनामखु र खोटाङको केपलासगढी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ । विप्लव समूहका कार्यकर्ताले प्रहरीमाथि फायर गरेको र जवाफी कारवाहीमा घिमिरेलाई गोली लागेको प्रजिअ खतिवडाले बताए ।
हतियारधारी समूह त्यहाँबाट जङ्गलको बाटो हुँदै भागेको बताइएको छ ।
गुठी विधेयक फिर्ता नभए कांग्रेसले संसद र सडकबाट प्रतिकार गर्छ : कोइराला
जनयुद्धपछि मात्र नेपालमा शान्ति छाएको छ - प्रचण्ड
किसानको उन्नति बिना देशको विकास हुन सक्दैन : मन्त्री अर्याल
नेवा राज्य बनाउँछु भन्थे, गुठी नै भत्काउन थाले – प्रदीप पौडेल
कतै तपाईं ब्युटी पार्लरबाट रोगहरू त ल्याइरहनुभएको छैन ? आजकल पार्टीहरूमा जानुअघि महिलाहरू ब्युटी पार्लरमा शृंगार गर्न पुग्छन् । सुन्दर देखिने प्रयासमा उनीहरू नजानिकनै रोग पनि बोकेर आउने सम्भावना रहन्छ । पार्लरमा प्रयोग हुने सामग्री राम्रोसँग...
कांग्रेस महाधिवेशन कहिले ? पौडेल र सिटौलालाई दिए देउवाले यस्तो जवाफ
इन्टरनेटमा अंकुश, आपत्तिजनक प्रावधान हटाइएन
शिवपुरीमा तीनतिर केबलकार, व्यवसायीले थाले लबिइङ